Ndị na-ebi akwụkwọ na scanners | January 2020
Isi Ndị na-ebi akwụkwọ na scanners
Kedu ka esi emeghe ohere na onye nbipute na netwọk mpaghara?
Ndewo! Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ n'ime anyị nwere ihe karịrị otu kọmputa na ụlọ anyị, e nwekwara laptọọpụ, mbadamba, wdg. Ngwaọrụ mkpanaaka. Mana onye nbipute ahụ dị ka otu! Na n'ezie, n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị na-ebi akwụkwọ na ụlọ - karịa karịa. N'isiokwu a, m ga-achọ ikwu banyere otu esi edepụta onye nbipute maka ịkekọrịta na netwọk mpaghara.
Esi esi jikọọ onye na-ebi akwụkwọ na netwọk. Otu esi kesaa onye nbipute maka PC nile na netwọk [ntụziaka maka Windows 7, 8]
Ndewo Echere m na uru nke ịmepụta ihe odide na netwọk mpaghara dị anya nye onye ọ bụla. Ihe atụ dị mfe: - ọ bụrụ na enweghi ike ịbanye na nbipute ahụ - ị ga - ebu ụzọ debe faịlụ na PC nke ejiri kọntaktị ahụ (iji eriri flash USB, diski, netwọk, wdg) wee bipụta ya (n'ezie iji bipụta faịlụ 1) ọ dị mkpa ime ihe iri na abuo "na-enweghị isi"); - ma ọ bụrụ na a haziri netwọk na ngwa nbipute - mgbe ahụ na PC ọ bụla na netwọk ọ bụla n'ime ndị editọ, ị nwere ike pịa otu "Bipute" bọtịnụ a ga-ezitere ya na ngwa nbipute ahụ!
Gịnị mere na anaghị ebipụta onye nbipute ahụ? Nhazi ngwa ngwa
Ndewo Ndị na - ebukarị ihe, ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ, na - eche nsogbu yiri nke ahụ mgbe ụfọdụ: ị na - eziga faịlụ iji bipụta - onye nbipute anaghị adị ka ọ na - eme (maọbụ ọ na - achọ maka sekọnd ole na ole ma rụpụtaakwa efu). Ebe ọ bụ na m na-enwekarị nsogbu ndị dị otú a, m ga - ekwu ngwa ngwa: 90% nke okwu mgbe onye nbipute anaghị ebipụta abụghị njikọ nke ma ọ bụ onye nbipute ma ọ bụ kọmputa ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ndị na-ebi akwụkwọ na scanners 2020